လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြတုန္းကစိတ္၀င္စားစရာေျပာင္းလဲမႈေတြရွိခဲ့ပါတယ္။ မိန်းကလေးများအဖျက်အမှောင့်မှတဆင့်ညစ်ညမ်းသို့တယ်နှင့်သူတို့ကပိုအရေးယူဘို့ညစ်ညမ်းပြွန်မှရွှေ့ပြောင်းစတင်ခဲ့ပြီးနောက်ယောက်ျားညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်များကြည့်ရှုအပေါ်အရှုံးမပေးဖို့စတင်ခဲ့သူတို့ယခု,လိင်ချက်တင်သို့မဟုတ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းကစားခြင်းတစ်ခုခုကိုအာရုံစိုက်။ အမျိုးသားတွေကအပြန်အလှန်လိုချင်ကြလို့ပါ။ ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ညစ်ညမ်းမှကြွလာသောအခါသူတို့ကထိန်းချုပ်မှုအတွက်ခံစားချင်တယ်။ စီအီးအိုေတြကအဲဒီလိုကမ္းလွမ္းေပမယ့္သူတို႔ကနည္းနည္းေတာ့ေစ်းေလွ်ာ့ေပးလို႔ရတယ္။ သို့သော်ယခုအရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းများကိုလည်းပြုလုပ်နိုင်ပြီးသင်အခမဲ့အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောညစ်ညမ်းမှုကိုရနိုင်သည်။, စာလုံးများကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အစစ်အမှန်ခံစားရစေရန်ဂရပ်ဖစ်နှင့်အင်ဂျင်ကိစ္စအတွက်တိုးတက်မှု၏အမျိုးမျိုးနှင့်အတူလာမယ့်သောဂိမ်းအသစ်၏မျိုးဆက်သစ်မှကျေးဇူးတင်ပါသည်ယခုသင်သည်တစုံတခုကိုဒေါင်းလုတ်သို့မဟုတ်တပ်ဆင်ဘို့မလိုအပ်နှင့်အတူသင်၏ဘရောက်ဇာထဲမှာစွဲငြိဖွယ်ရာညစ်ညမ်းအတွေ့အကြုံကိုခံစားနိုင်. သင်ပင်ဤအတွေ့အကြုံအတွက်အကောင့်တစ်ခုမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့အခြေခံအားဖြင့်အခမဲ့လိင်ပြွန်အပေါ်ရညစ်ညမ်းအစည်းအဝေးများ၏တူညီသောအမျိုးအစားကိုပူဇော်သက္ကာဘို့,ဒါပေမယ့်လျော့နည်းကြော်ငြာတွေနဲ့အစားလွှဂိမ်းနှင့်အတူ.
သငျသညျအခမဲ့လိင်ပြွန်ပေါ်ရအဖြစ်ဒီဆိုက်အပေါ်တူညီတဲ့အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံရှိသည်သာမက၊ငါတို့သည်လည်းတူညီတဲ့အမျိုးအစားများနှင့်မျိုးနှင့်အတူလာ။ ဒီဆိုက်ကိုအတူတူတင်တဲ့အခါအမျိုးသားတွေဘာလိုချင်တယ်ဆိုတာသိသွားပြီးဝဘ်ဆိုဒ်ကနေအားလုံးစုပြီးတင်ကြပါတယ်။ ကျနော်တို့ထို့နောက်ဂိမ်းစမ်းသပ်ပြီးယခုသင်တို့ရှိသမျှအိပ်မက်တွေစစ်မှန်တဲ့လာနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာဒီပွတ်ညစ်ညမ်းပလက်ဖောင်းရှိသည်။ ယနေ့ညကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူကစားလာကြ!
(၂)သင္လိုအပ္တာမွန္သမွ်ကိုျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ မေမ့ပါနဲ႔။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ရှိသည်ကတည်းက,ငါတို့သည်ပင်သင်လိုအပ်သောအရာကိုသိရန်မလိုအပ်ပါဘူး,ငါတို့ပြီးသားကြောင့်. သင်အမှန်တကယ်လိုအပ်သောအရာကိုသင်ယခုအချိန်တွင်အဘို့အညာဘက်ကိုကမ်ဘာကောက်နိုင်သည့်အနေဖြင့်တစ်ဦးစုဆောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ တစ္ေန႔ေန႔ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာသင္ဟာဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြနဲ႔ေဝးကြာသြားလိမ့္မယ္လို႔ သင္ခံစားရပါလိမ့္မယ္။ သင်ခံစားချင်တယ်သင်ျတနစာမျက်နှာများနှင့်အခြားအ၊ကိုယ့်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရက်သတ္တပတ်အချို့နှင့်အတူ GF simulators ရာအတွက်ကစားပါလိမ့်မယ်အသွင် GF squirt၏ငသို့မဟုတ်၏မျက်နှာ၌။
အဘယ်သူမျှမကိစ္စသင်လိုအပ်သောအရာကိုဤနေရာတွင်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအကြှနျုပျတို့သညျဤမျှလောက်များစွာသောနည်းလမ်းတွေထဲမှာဆက်ကပ်။ ကျနော်တို့ကဒီမှာညစ်ညမ်းဂိမ်းအများအပြားအမျိုးအစားများရှိသည်,ဒါပေမယ့်အဓိကသူမြားကိုလိင်ဃနှင့်ကျောဇောဖြစ်ကြသည်။ အကယ်၍သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တွင်သင်၏တစ်ညလုံးမဖြုန်းလိုဟုခံစားရပြီးသင်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းသင်လုပ်သောအရာတစ်ခုခုလိုချင်ပါကလိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။ လိင်ဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံနှင့်လိင်အပေါ်ထိန်းချုပ်မှုကိုသင်အထီးသဘင်နေသောရုပ်ရှင်များသို့ဤဂိမ်းများကိုလှည့်နေသည်။ အချို့ဂိမ်းများသည်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန်အတွက်အရေခွံများအဖြစ်ပါ ၀ င်သောကြောင့်ဤအမျိုးအစားတွင်သင်ကာတွန်းနှင့်ကာတွန်းများမှကျော်ကြားသောသားငယ်အမျိုးမျိုးကိုလည်းသင်ဆွဲနိုင်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်,သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သင်၏တစ်ခုလုံးကိုညဥ့်သုံးဖြုန်းဖို့လိုပါလျှင်သင်သည်သင်၏ရိုင်းစိတ်ကူးယဉ်နှစ်သက်ဖို့မျိုးစုံဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ပုံပြင်ထဲမှာဗတ္တိဇံခံချင်တယ်,ကျနော်တို့ကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များအတွက်ဂိမ်းရှိသည်။ လက်တွေ့ကျကျကျိကျိတက်သူတို့အစစ်အမှန်အသက်တာ၌ဖြစ်ပျက်လိမ့်မယ်နဲ့တူသငျသညျအတှေ့အကွုံမြားကိုငါပေးမည်။ ဂိမ်းကစားသူများအတွက်ဂိမ်းများ၊မစ်ရှင်များနှင့်အဆင့်ဆင့်ရှိသည်။
ငါအများအပြားဆိုဒ်များအရည်အသွေးအခမဲ့အကြောင်းအရာပူဇော်သက္ကာဘို့ဖြစ်ကြောင်းကိုငါသိ၏,ဒါမှမဟုတ်သူတို့ပြုသည့်အခါဖြစ်စေကြော်ငြာများနှင့်မှတ်ပုံတင်တောင်းဆိုမှုများအောက်တွင်သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံသည်,ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်နမူနာအဖြစ်ကြွလာ. ကောင်းပြီ,ကျနော်တို့ကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုကြိုးစားပါ။ လိင်ဂိမ်းကစားခြင်းလုပ်ငန်းသည်အဓိကညစ်ညမ်းလုပ်ငန်းနှင့်တူသည်မဟုတ်ပါ။ ႀကီးမားတဲ့ဖန္တီးသူတို႔ကိုပိုင္ဆိုင္ထားၿပီးေသးငယ္တဲ့ဖန္တီးသူတို႔ကကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္အလုပ္မျဖစ္ပါဘူး။ ကျနော်တို့ရိုးရှင်းစွာမိတ်ဖက်များနှင့်လူတိုင်းအတွက်တရားမျှတကြောင်းနည်းလမ်းများအတွက်ပူးပေါင်း။ ဒီမှာလျှို့ဝှက်ချက်ပဲ။ ဒီပူးပေါင်းမှုမှာမင်းဟာမိတ်ဖက်လည်းဖြစ်တယ်။ သင့်ရဲ့အလုပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်မှာလာမယ့်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းကစားခြင်း,ဒါ့အပြင်သင့်ရဲ့ကြော်ငြာဘောက်ဆာအတွက်ခြွင်းချက်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုထည့်သွင်းဖို့သေချာအောင်နေစဉ်., ထိုမှတဆင့်သင်အမှန်တကယ်လူအားလုံးပါဝငျကူညီလိမ့်မည်,ကြှနျုပျတို့အနာဂတျမှာပိုပြီးအမာခံအကြောင်းအရာအားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီနိုင်အောင်.